Dreame L10 Pro: uhlalutyo, ixabiso kunye neempawu | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | | elektroniki
Sibuya nemveliso yeDreme ezinikele ekucoceni ikhaya, enye yezo zisefashonini mva nje. Kutshanje sineDreme T20 apha, isicoci esibamba ngesandla esinomatshini osebenza kwinqanaba eliphezulu kwaye oko kusishiye siziva siziva kamnandi.
Ke ngoku siyaqhubeka nale mveliso intsha, isicoci serobhothi Dreame L10 Pro, imveliso engqukuva enokusinceda sigcine amakhaya ethu ecocekile. Hlala nathi kwaye ufumanise ukuba iDreame L10 Pro iza njani ukuze ikhuphisane ngokuthe ngqo nezona mveliso zibiza kakhulu kwimarike nokuba ifanelekile na okanye hayi ngoku.
1 Iimpawu zobugcisa Dreame L10 Pro
2 Ukuzimela kunye nokusetyenziswa kwansuku zonke
3 Ivacuum elungileyo, ikhuhla "endilisekileyo".
Iimpawu zobugcisa Dreame L10 Pro
Le Dreame L10 Pro inamandla aphezulu 4.000 Pa ukufunxa, ephakathi komyinge wezinto ezi ntlobo zeemveliso ezinikezelayo ngaphakathi koluhlu lwe-robot vacuum cleaners ngexabiso elifanayo nangaphezulu. Ngokwenxalenye yayo, inomthamo kwi 570 ml itanki eqinileyo, ngelixa uvimba we-fluid we ukukhuhla kuhlala kwi-270 ml. Konke oku kukhatshwa yi-chassis emnyama yeplastiki eqhelekileyo, enezivamvo zayo phezulu.
Imixholo yebhokisi yile ilandelayo:
Irobhothi L10 Pro
Isixhobo seenjongo ezininzi
Icala kunye nebrashi ephakathi
Asinayo, ngokuqinisekileyo, naluphi na uhlobo lwemveliso "eyongezelelweyo" yokugcinwa okanye ukutshintshwa kwamacandelo, xa ziwohloka siya kufikelela kwindawo eqhelekileyo yokuthengisa, amaxabiso okwexeshana ongazi. Into esicacileyo ngayo kukuba yimveliso enemilinganiselo ye 350 x 350 96 millimeters enika ubunzima obupheleleyo be-3,7 Kg, Ayincinci loo nto, kodwa ikwangaphakathi koluhlu oluqhelekileyo kolu hlobo lwesixhobo.
Ukuzimela kunye nokusetyenziswa kwansuku zonke
Ekusetyenzisweni kwemihla ngemihla le robhothi inika ingxolo ephezulu eya kuba malunga ne-60 db ngowona mzuzu ubalulekileyo wokufunxa, ngaphakathi kolungelelwaniso olwahlukileyo olunikezwa licandelo elithile lesicelo seMi Home, leyo, njengoko uyazi kakuhle, yiyo elawula indawo edibeneyo yeXiaomi kunye neemveliso zayo, ezihambelana nazo zombini. Android njengokuba iOS ngokubanzi
Malunga nokuzimela, sonwabela malunga ne-5.000 mAh ibhengezwe luphawu, oku kuya kusinika ukucocwa kwendawo yonke Imizuzu eyi-150 okanye ukuya kuthi ga kwi-200 yeemitha, Inyani esingakhange sikwazi ukuyiqinisekisa kuba asinayo indlu enkulu kangako (ngethemba), kodwa ifika malunga ne-35% ekupheleni kococi. Ukucoca okuneenkcukacha ngokufanelekileyo, ngaphandle kokugqithiswa kwiipasi kunye nokudibana nokusebenza okulindelweyo kolu hlobo lohlalutyo lwemeko engqongileyo enkosi imephu yokusingqongileyo kwi-3D (nge-LiDAR) eyenziwa nge-cast of sensors. Ekuphumeleleni kokuqala, njengoko usazi kakuhle, kuya kucotha ngandlel' ithile, ngelixa ukusuka ngoku ukuya phambili kuya kuthatha ithuba kunye nexesha lokubulela kulwazi olufundiweyo.
Ivacuum elungileyo, ikhuhla "endilisekileyo".
Njengamaxesha onke, kungakhathaliseki ukuba zininzi kangakanani itekhnoloji ezibandakanya, ukukhuhla kungaphezulu kwe-mop emanzi eyenza umsebenzi wayo, kodwa ayiyi kususa awona manqaku afanelekileyo okungcola. Sinomsebenzi obalulekileyo wokusingqongileyo. Nangona kunjalo, ngokubanzi sinenye indlela elungileyo kule Dreame L10 Pro, uphawu, kwelinye icala, luphawu lokubulela kubudlelwane balo obusondeleyo phakathi komgangatho kunye nexabiso.
Sinayo, inokuba njani ngenye indlela, ungqamaniso kunye IAmazon Alexa kunye noMncedisi kaGoogle, ke usuku nosuku luya kuba lula ukuba sibuza nje umncedisi wethu osemsebenzini. Imveliso ecetyiswayo, eye yanelisa ngokusetyenziswa ngokubanzi kwaye unako Thenga apha kunye nesiqinisekiso saseAmazon.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » I-Dreame L10 Pro: uphononongo, ixabiso kunye neempawu